Wakiiladda Beesha Caalamka iyo Farmaajo oo Shir uga socda Villa Somalia | KEYDMEDIA ONLINE
Wakiiladda Beesha Caalamka iyo Farmaajo oo Shir uga socda Villa Somalia
Ujeedka kulanka ayaa ah in Farmaajo ogolaado Shirka lagu baaqey ee u dhaxeeyay dowladdiisa iyo Maamul Goboleedyada kaasoo lagu dhameynayo khilaafka doorashadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kulan albaabada u xran ayaa ka socda Villa Somalia, kaasoo u dhaxeeyay Farmaajo iyo Wakiiladda Beesha Caalamka u fadhiya Muqdisho.
Shirkan ayaa loogu gogol xaarayaa Kulan ballaaran oo lagu baaqey in Caasimadda la isagu yimaado kaasoo Madaxda DF iyo Maamullada uga arinsanayaan khilaafka ka taagan doorashadda dalka.
Wararka ayaa sheegaya in Beesha Caalamka cadaadis ku saarayso Farmaajo inuu ku dhawaaqo Shirka qabashadiisa, islamarkaana casuumaad rasmi ah u diro Madaxda Maamullada, oo dhawaan sheegay inay diyaar u yihiin wadahadalka.
Dowladda Mareykanka ayaa gadaal ka riixaysa qabashadda shirka, iyadoo dhowr jeer soo saartay qoraall hanjabaad iyo digniino xambaarsan oo u dirtay siyaasiyiinta iyo Madaxda dalka, iyadoo sheegtay inaan la aqbali doonin dib u dhac kale iyo hanaan doorasho oo isbar-bar socda.
Puntland iyo Jubbaland ayaa dhawaan ku baaqey in 30-ka bishan shir la isagu yimaado Muqdisho kadib markii ay soo magacaabeen xubnihii gudiga doorashadda ee laga sugayay mudada dheer, waxayna muujiyeen tanaasul Beesha Caalamka soo dhawaysay.
Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inuu caqabad ku yahay xal ka gaarista muranka doorashadda, isagoo mar kasta oo la isku dayo in dhinacyada la isku soo dhawaayo uu soo saaro go'aan cusub oo sii hurinaya khilaafka.